Waxaan u dabbaaldegnaa Maalinta Ascension, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Aadamuhu ikhtiyaar buu leeyahay
Ilaah weli ma ina jecel yahay?
Inaad noqoto qof weyn oo iimaan ah
Meesha Eebbe joogo
Imanuel Illaah baa nala jira
DNA-da abuur cusub
XUL QORAAL> AUDIO
Maalinta loo yaqaan Ascension Day ma ahan mid ka mid dabaaldegyada waaweyn ee kalandarka masiixiga sida Kirismaska, Jimcaha wanaagsan iyo Ciidda Masiixiga. Waxaa laga yaabaa inaan hoos u dhayalsanayn muhiimadda dhacdadani. Ka dib dhaawacyadii iskutallaabta iyo guushii sarakicidda sarakicidda, waxay umuuqataa inaanay khusaynin. Si kastaba ha noqotee, taasi waa khalad. Ciise sarakiciyay ma ahan oo keliya inuu sii joogo 40 maalmood ka dibna wuxuu ku noqday jannada aaminka ah waayo shaqada dhulka ayaa hadda la qabtay. Ciise sarakiciyay waa mid weligiis jiraya sida nin oo Ilaah si buuxda uga go'an tahay u-qareenkeena (1 Timoteyos 2,5: 1; 2,1 Yooxanaa).
Falimaha Rasuullada 1,9: 12 waxay sheegaysaa Ascension. Ka dib markuu cirka kor u aaday, waxaa jiray laba nin oo dhar cad qaba oo xertii ku leh: Maxaad halkaas taagan oo cirka u fiirineysaa? Wuu soo laaban doonaa sidaad aragtay isagoo samada u socda. Taasi waxay ka dhigeysaa laba arrimood mid aad u cad. Ciise jannada ayuu ku jiraa wuuna soo noqonayaa.
Efesos 2,6 Bawlos wuxuu qoray: "Ilaah baa na sara kiciyey, oo wuxuu samada inagu geliyay Ciise Masiix. Waxaan marar badan maqalnay" Masiixa "Tani waxay ina tusinaysaa aqoonsigeenna Masiixa. Waxaannu Masiixa kula dhimannay isaga, la aasay oo la sara kacay, laakiin hadda isaga jannada ha lagula jiro ".
John Stott wuxuu ku qoray buuggiisa 'The Message of Efesos': 'Paul wax kama qoro Masiixa, laakiin annaga ayuu nagu saabsan yahay. Ilaahay jannada ayuu ina geliyey. Wehelnimada dadka Eebbe iyo Masiixa waa qodobka ugu muhiimsan ”.
Kolosay 3,1: 4, Bawlos wuxuu ku nuuxnuuxsaday runtaan:
Waad dhimatay oo noloshiinnuna Masiixay kula qarsoon tahay Ilaah. Laakiin haddii Masiixu, noloshiinnu isu muujiyo, markaasaad idinkuna ammaan kula soo muuqan doontaan. "In Masiixa" macnaheedu waa in lagu noolaado laba dunid: jidhka iyo ruuxa. Hadda si adag ayaynu u garan karnaa, laakiin Bawlos wuxuu leeyahay waa dhab. Markuu Masiixu soo noqdo, waxaan la kulmi doonnaa buuxitaanka aqoonsigeenna cusub. Eebbe ma doonayo inuu nafteenna inaga tago (Yooxanaa 14,18), laakiin lala wadaago Masiixa wuxuu doonayaa inuu wax walba nala wadaago.
Ilaah wuxuu inala midoobey Masiixa sidaa darteed waa lagu dari karaa xiriirka uu Masiixu la leeyahay aabaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Masiixa, oo ah Wiilka Ilaah weligiis, waxaynu nahay carruurta jecel carruurtiisa. Waxaan u dabaaldegnaa Maalinta Ascension. Waqtigani waa wakhti wanaagsan oo lagu xasuusto warkan wanaagsan.